Nice Help | Waxaan rabaa cunno, maxaan sameyn karaa?
Waxaan rabaa cunno, maxaan sameyn karaa?
Codso dheefaha SNAP
Sahaminta waxtarka Barnaamijka Nafaqada ee Haweenka, Dhallaanka, iyo Carruurta (WIC)
Fiiri meesha kugu dhaw ee cunto lagu qabiyo
Barnaamijka Kaalmada Nafaqada ee Dheeraadka ah (SNAP)
Faa'iidooyinka ayaa lagu soo saaraa kaararka EBT waxaana loo isticmaali karaa oo keliya in lagu iibsado badeecooyinka cuntada alaabada, suuqyada beeralleyda iyo iibiyaha kale ee ay ansaxisay USDA.
Waxaa ku taxan dhamaan goobaha cuntada laga helo dhamaan 53ka degmo ee North Dakota. hel midka kuugu dhow haddii aad u baahato kaalmada cuntada.
Hayaada HealthWell Sanduuqa COVID-19
Hesho lacagta carbuunta ilaa $ 250
Miisaaniyadda waxaa loo isticmaali karaa adeegyada soo socda ee COVID-19: gaarsiinta cuntada, keenista daawada, baaritaanka cudurrada, kharashka teleefonka, iyo kharashka gaadiidka.
Barnaamijka Cuntada Xagaaga
Hel adeegyada cuntada ee carruurta agagaarkaaga ah.
Makhaayadaha oo caruurta cuno bilaash ah siinaya
Enamada Rhombus : Waxaa lasoo dhejiyay FB: Qoomka Rhombus , waxaan u heellan nahay bulshadan waqtigaan baahan. Waxaan siin doonaa carruurta cunno ilmo kasta, wax su'aalo ah lama weydiin. #nokidshungry#ftherona#rhombusnation xiriir: 701-540-4534
JC Chumley's (1608 Main Avenue, Moorhead) waxay siineysaa qado yar oo bilaash ah carruurta halka sahayda ugu dambeysa ay jirto. 11 subaxnimo - 2-da galabnimo. Soo qaadashada KELIYA taleefanka 218-236-7813
Kittsona (23 8th St S, Fargo). Gaarsiinta waa la heli karaa, fadlan soo wac 701-936-0608
Legend's Sports Bar (803 Belsly Blvd, Moorhead) waxay siineysaa 500 oo qado oo qad ah caruurta ku nool bulshada Sabtida kaliya. Wixii macluumaad dheeraad ah, booqo boggeeda Facebook-ga markaad wacdo farriin una sheeg intaad u baahan tahay, ama wac 218-477-1010
Cunnooyinka iyo Gaarsiinta Cuntada
Cusbooneysiinta coronavirus ee Fargo-Moorhead iyo liiska makhaayadaha la siinayo cuntada:
Ururka Ganacsiga Moorhead wuxuu bixinayaa cusbooneysiin ku saabsan gaarsiinta cuntada ee aagga F / M
Dhulka hoostiisa ee Fargo: Liiska makhaayadaha ku yaal badhtanka Magaalada ee FM iyadoo la keenayo / la geeyo
Cunnooyinka Uber waxay bixiyaan Keenis bilaash ah iyo sidoo kale makhaayadaha si madax-bannaan loo leeyahay:
Perkins waxay haysaa raashin (alaabada cuntada iyo alaabada guriga) oo la heli karo si looga qaado, ama waxay ka soo bixi kartaa adeegyada gaarsiinta (Door dash, uber eat, ect.)
wac 701-232-2441 wakhtiga banaan.
Halkan ka fiiri waxyaabaha la heli karo
Adeeg gaynta ee Waaxda Booliska Dilworth
Ma isticmaashaa Appka Adeega ee Walmart Dilworth? kuna noolaa Dilworth. Haddii aad sameyso oo aad caruur ku haysato guriga, ama waayeel ah oo aad u baahan tahay qof uruursada, soo wac Waaxda Booliska Dilworth
Shuruudahan ayaa ah in tani ay ahaato inta lagu gudajiro waqtiyada Walmart Pickup oo ah 1100 - 1800 inta laga sugayo wicitaannada kale ee DPD ee adeegga. Waa inaad ku iibsatay alaabada adoo isticmaalaya Appcg Grocery (Kaliya dukaamada) Annagu ma gaarsiin doonno waxyaabaha guud.
Wac 218-287-2666 kala tasho shaqaalaha DPD lambarka dalabka iyo magacaaga iyo cinwaankaaga. (Xusuusnow inaad wacdo Walmart oo aad u liis garato DPD sidii aruuriyaha) Fadlan sii saacad ama kabadan qaadista. Waxaan la shaqeyn doonnaa Walmart Dilworth si aan u ururinno oo u gaarsiinno alaabtaada albaabkaaga. Saraakiisha ma soo galaan gurigaaga waana inaad guriga u joogtaa adeeggan. (Tan kuma jiraan barnaamijka qaadista tooska ah ee khadka tooska ah) Raashinka KALIYA .
Fadlan xusuusnow tani waa in la caawiyo kuwa sida kale aan awood u yeelan karin dukaanka ama ay sii kordhin karaan dhibaatada ama suurtagalnimada in cudurka uu ku dhaco
Cashwise- dhan ka soo qaadida. Dalbo khadkaonlineka tooska ah oo ka soo qaado. Waxa kale oo aad ku gayn kartaa cunto (macaamiisha cusub ayaa bilaash ah marka ugu horraysa 3 alaab-gaarsiin) barta internetka
Hornbachers- ka soo qaadida ama guri gaynta. Barta Internetka.
Target adoo baabuur ku jirtid qaadashada. Barta internetka
Walmartqaadista iyo gaynta . Barta internetka ama appka dukaanka Walmart
Quudinta Macmacaan iyo cunta gaynta.
Udir fariin 701-541-7557 si jadwalka laguugu daro
Booqo bartooda Facebook wixii macluumaad dheeri ah
Ka dukaameysiga Jennifer waa ganacsi yar oo maxalli ah. Waxaad u dirtaa Jennifer dalbkaaga oo waxay tagi doontaa dukaamada badankood ee metrooga si ay u soo hesho dalbkaaga. Way fiicantahay oo had iyo jeer waxay heshaa wax soo saarka ugu fiican: https://www.facebook.com/shopperjenb/
Dukaameysiga bagaashka ee Dadweynaha Halista ku jira
Cashwise & Hornbachers
Cusboonaysiin ku saabsan saacadaha hawlgalka iyo dadaallada ahmiyad siinta kala iibsashada dukaamanka ee dadka halista ugu jira saacadda ugu horreysa maalinta
Fur 7 Subaxnimo - 10-ka fiidnimo Moorhead iyo Fargo
Dollar General wuxuucusbooneysiiyaa ku saabsan u gogol dhigida saacadaha hore macaamiisha waaweyn
Family Fare ku yaala Fargo iyo Galbeedka Fargo waxay waqti u siinayaan dadka waayeelka ah, haweenka uurka leh, iyo nidaamyada difaaca ee loo aaneeyey inay wax ka iibsadaan 7-9 subaxnimo iyo Khamiista.
Walmart ayaa waliba isbedelaysa saacadaha isla markaana qabata nadaafad habeenkii ah
Si aan si wanaagsan u taageerno jaalayaasheena oo aan ugu adeegno macaamiisheenna, waxaan hagaajin doonnaa saacadahayaga shaqada laga bilaabo Axadda, Maarso 15 Dukaamada Walmart iyo Suuqyada Xaafadaha waxay furnaan doonaan 7 am illaa 8:30 pm illaa ogeysiis dambe. Tani waxay gacan ka geysan doontaa in la hubiyo in la-hawlgalayaasha ay awoodaan inay kaydisaa badeecada ay macaamiisheennu raadinayaan iyo inay nadiifiyaan oo ay nadiifiyaan. Dukaammada hada shaqeeya ee ka hooseeya saacado ka dhimis badan (tusaale ahaan waxay si joogto ah u xirnaadaan 10 pm ama waxay furan yihiin 7 am) waxay hayn doonaan saacadaha ay shaqeynayaan.
Tafatir 03/25, saacadaha cusub waa 7am ilaa 8:30 pm
Beeraleyda Alaabada Iibika
Beeraleyda ND - MN
Fargo Cunto Qaadasho
Dhulka hoostiisa ee Fargo
Barnaamijka Nafaqada Haweenka, Dhallaanka, iyo Carruurta (WIC)
Caafimaadka Fargo Cass - Adeegga Cuntada iyo Nafaqada ee USDA